Local News Archives - Celegroup
အာဏာရွင္ရဲ႕ ဇာတ္သိမ္း (ဖတ္ၾကည့္ပါ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္)
August 21, 2021 cele group 0
အာဏာရွင္ရဲ႕ ဇာတ္သိမ္း (ဖတ္ၾကည့္ပါ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္) ဟစ္တလာရဲ႕ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္ေတြကို သူ႔ရဲ႕ဘန္ကာထဲမွာဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဟစ္တလာနဲ႔အတူတကယ္အနီးကပ္ရွိခဲ့တဲ့ ဟစ္တလာရဲ႕ secretary ေကာင္မေလးကို accurate အျဖစ္ဆုံး လို႔လဲေျပာလို႔ရပါတယ္.. ဆိုဗီယက္တပ္ေတြၿမိဳ႕ေတာ္ဘာလင္ကို ဝိုင္းထားတဲ့အခ်ိန္အထိ ဘန္ကာထဲမွာ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲေတြ.. ေသာက္ဝိုင္းစားဝိုင္းနဲ႔ ကပြဲသဘင္ေတြ က်င္းပေပးပါတယ္.. သေဘာကေတာ့ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိႀကီးေတြကလြဲရင္ ဘန္ကာထဲအတူတူေနၾကသူနီးစပ္တဲ့အသိုင္းအဝိုင္းကိုေတာင္ သူတို႔အေျခအေနဆိုးေနၿပီဆိုတာကို ေပးမသိဘူးဆိုတာပါပဲ.. အာဏာရွင္ဟာ သူအေျခအေနဆိုးလာေလ.. သူအေျခအေနဆိုးေနၿပီဆိုတာကို သူ႔လက္ေအာက္ကလူေတြသိမွာစိုးရိမ္ေလပါပဲ.. ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔လူေတြကို မျပတ္တမ္းေပ်ာ္႐ႊင္တက္ႂကြေနေစပါတယ္.. အေမွာင္မိုက္ဆုံးေသာ ေန႔ရက္ေတြအထိ ညဘက္ေတြမွာ […]
ဖားကန့် မှာ အင်တာနက်လိုင်းတွေ စဖြတ်လိုက်ပြီ စစ်ကောင်စီက ဖားကန့်တွင် အင်တာနက်လိုင်းများဖြတ်တောက်ထား ဖားကန့်လုံးခင်းရတနာမြေအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်လိုင်းအချို့ကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဒီကနေ့ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း စတင်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံများအပြောအရသိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်လုံးခင်းရတနာမြေတွင် MPT ၊ Telenor (Myanmar)၊ Shwe War Ohh (အော်ရီဒူး) WiFi လိုင်းများ အားလုံးကို ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဖြတ်တောက်ထားသည်မှာ ယခုသတင်းပေးပို့ချိန်အထိလည်း ပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လ […]
မြန်မာပြည်အတွက် အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းတွေ လာပါတော့မယ်
August 19, 2021 cele group 0
မြန်မာပြည်အတွက် အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းတွေ လာပါတော့မယ် ညနေကတွေ့လိုက်တဲ့ နိမိတ်ကောင်းတွေလာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ မိုးတိမ်ထူးခြားပါတယ်အလွန်ကိုဆန်းကျယ်နေပါပြီ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ညနေပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိမ်ပုံစံပါဘဲ။ လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ထားတာပါ Photo Shopမဟုတ်ပါ။အမှန်တကယ်ပုံပါနော် ဒီပုံကိုတော့ ညီလေးတစ်ယောက်က ညနေခင်းအမေနဲ့အပြင်ထွက်ရာမှ အမှတ်မထင်မြင်တွေ့ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တာကတော့ Thet Zaw Accကဖြစ်ပါတယ်။နိမိတ်ကောင်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်လို့ယူဆရတဲ့ နိမိတ်ထွန်းတောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘဲ လောကနတ်တွေက မြန်မာပြည်သူတွေ ပျော်ရွှင်ရကာ အနာဂတ်ကောင်းပိုင်ဆိုင်ပြီး ၊ ပြည်သူတွေအမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်ပါမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဒီပုံလေးကတော့ ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ crd; ျမန္မာျပည္အတြက္ […]
“ပ်ိဳးေထာင္သင့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ (၅) ခု ”
August 18, 2021 cele group 0
“ပ်ိဳးေထာင္သင့္တဲ့ အေလ့အက်င့္ (၅) ခု ” ၁ – မေျပာဘူး သိေပမဲ့ အတင္းဝင္မေျပာတတ္တဲ့ အက်င့္ကို ေမြးပါ။ အရာရာငါသိ ငါတတ္လုပ္သူကို ဘယ္သူမွ သေဘာမက်ပါဘူး။ မသိဘဲ ဝင္ေျပာတဲ့အက်င့္ကိုေတာ့ ေဖ်ာက္ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ – မၿငီးျငဴဘူး အၿမဲတမ္းၿငီးျငဴေနသူကို ဘယ္သူမွ သေဘာမက်ပါဘူး။ ေတာ္႐ုံနဲ႔ မၿငီးျငဴတတ္တဲ့ အက်င့္ကိုလည္း ပ်ိဳးေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃ – စိတ္ရွည္ပါ စိတ္မရွည္တတ္တာေၾကာင့္ သင့္ကို […]
အဆင္မေျပမႈေတြမ်ားစြာထဲက ရေအာင္ေက်ာ္ျဖတ္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို စကားလက္ေဆာင္ပါးခဲ့တဲ့ဖိုးခ်စ္
အဆင်မပြေမှုတွေများစွာထဲက ရအောင်ကျော်ဖြတ်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို စကားလက်ဆောင်ပါးခဲ့တဲ့ဖိုးချစ် ဇာတ်မင်းသား ဖိုးချစ်ကတော့ မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ကိုယ်တိုင် အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံနေရချိန်မှာတောင်ပရိသတ်တွေကို စိုးရိမ်စိတ်အပြည့်နဲ့ စကားလက်ဆောင်လေးရေးသား ဝေမျှပေးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူများနဲ့အတူ ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရတဲ့ မိသားစုများအားလုံး ကျန်းမာရေးအထူး ဂရုစိုက်ကြဖို့ မှာကြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး အဘက်ဘက်က စိန်ခေါ်မှုကြီးမားနေချိန်မှာ ရအောင် ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခြင်းဟာလည်း လူသားတစ်ယောက် ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ကြောင်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။ ခေတ်ကပေးသော ကာလကပေးသော […]
ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္း ပိုင္ရွင္ ေတးေရး နိုင္ျမန္မာကြယ္လြန္….
အားလုံးသိကြတဲ့ “ကမ္ဘာမကြေဘူး” သီချင်း ပိုင်ရှင် တေးရေး နိုင်မြန်မာ ကွယ်လွန် “ကမ္ဘာမေကြဘူး” သီခ်င်း ပိုင်ရွင် တေးရေး နိုင်ျမန္မာကြယ္လြန်သြားရွာပြီအသိဉာဏ်ပညာ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ဒီနေ့ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းရဲ့ ဖန်တီးရှင် တေးရေးနိုင်မြန်မာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ အဓိက ကလက်ရှိ ည ၈နာရီတိုင်း သူ့သီချင်းတွေဆိုနေတဲ့ အကြောင်းကို အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဆရာနိုင်မြန်မာက အသက်(၆၃)နှစ်ရှိပြီ။လူပုံကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် ခန္ဓာကိုယ်က ၀၀လုံးလုံးအသားညိုညိုနဲ့ လက်ခလယ်ကြားမှာ မယ်ခွေပဲအမြဲနေတယ်။ ၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ သီချင်းရေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အလျှောက် […]
“ကမာၻမေၾကဘူး” သီခ်င္း ပိုင္ရွင္ ေတးေရး ႏိုင္ျမန္မာကြယ္လြန္….
PDF ကိုလှူဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံ သိန်း ၅၀ နဲ့ လေလံအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံတခုကို သိန်း(၅၀)ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားဓါတ်ပုံဆရာတဦး ဖြစ်သူ ကိုဘိုဘို က ၎င်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံ တခုကို ယမန်နေ့ သြဂုတ်လ ၆ရက်နေ့ည ၉နာရီ က စတင်လေလံတင်ပြီး ရောင်း ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ “ဒီပုံလေးကို လေလံဆွဲပြီး အလှူခံပါ့မယ်ဗျာ။ကျနော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ။ဒီပုံလေးကို လေလံအောင်တဲ့သူက ရာသက်ပန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါ။ print […]
သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ ဒို့အရေး ကြွေးကြော်သံများ
August 8, 2021 cele group 0
ယနေ့ည မန္တလေးအိုးဘိုထောင်အတွင်း ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားနေ မန္တလေး အိုးဘိုထောင်အတွင်းမှာ ဩဂုတ် ၈ရက်၊ည ၉နာရီကျော်လောက်ကနေစပြီး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတယ်လို့ ထောင်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူ တစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။ “ကိုးနာရီလောက်ကတည်းက ဆူသံတွေ ဟိန်းလာတာပဲ။အဲဒီလိုအသံကြားပြီး မကြာဘူး သေနတ်သံတွေကြားရတယ်။ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး။”လို့ ထောင်အနီးမှာ နေထိုင်သူကပြောပါတယ်။ ထောင်ပတ်ဝန်ကျင်မှာတော့ အာဏာသိမ်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကနေရာယူထားပြီး အိုးဘိုရပ်ကွက် ၇၆လမ်း၊ရထားသံလမ်းကူးကိုပိတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဖုန်းအားလုံးကို အာဏာသိမ်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က […]
August 7, 2021 cele group 0
NUG အစိုးရက “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ” ဟူသည့် ထီ လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်တော့မည် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အလုံးစုံပျက်သုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားစေရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ပီပြင်စွာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် မဆုတ်မနစ်၊ အလံမလှဲစတမ်း ကြံ့ကြံ့ခံ တော်လှန်နေသည့် CDM ဝန်ထမ်းများ ထိရောက်စွာကူညီထောက်ပံ့ရန်အတွက် NUG အစိုးရက “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ” ဟူသည့် ထီ လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ပြည်သူလူထု၏ တခဲနက်ဆန့်ကျင်ညီညွတ်စွာသပိတ်မှောက်ခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ “အောင်ဘာလေထီ” လုံး၀ […]
“အမေ့ကိုနောက်ဆုံး အရာလေးလုပ်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်မလုံးဝမငိုတာာပါ”ဆို တဲ့ မေပန်းချီ…
August 6, 2021 cele group 0
သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီ၏ မိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊သြဂုတ်၅ရက်။ သရုပ်ဆောင်မေပန်ချီ၏ မိခင်ဖြစ်သူသည်ယနေ့သြဂုတ်၅ရက်နေ့ညတွင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ “”ကျွန်မစကားလေးနားထောင်ပြီး အခုပဲကျွန်မအမေကြီးအပြီးအနားယူသွားပါပြီ အိပ်ပျော်သွားပါပြီ” ဟု မိခင်ဖြစ်သူဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ မေပန်းချီ၏ ပြောဆိုမှုကြောင့် သိရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ဆောက်လုပ်နေသော အိမ်သစ်ကြီး ပြီးစီးတဲ့အထိ မိခင်ကြီး ရှိနေဖို့ မျှော်မှန်းထားသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ခွဲခွာသွားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ credit သ႐ုပ္​ေဆာင္​ေမပန္ခ်ီ၏ မိခင္ျဖစ္သူကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္၅ရက္။ သ႐ုပ္​ေဆာင္​ေမပန္ခ်ီ၏ မိခင္ျဖစ္သူသည္ယ​​ေန႔ၾသဂုတ္၅ရက္​ေန႔ညတြင္ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ “”ကြၽန္မစကားေလးနားေထာင္ၿပီး အခုပဲကြၽန္မအေမႀကီးအၿပီးအနားယူသြားပါၿပီ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါၿပီ” ဟု မိခင္ျဖစ္သူဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီျဖစ္တဲ့ ​ေမပန္းခ်ီ၏ ​ေျပာဆိုမႈ​ေၾကာင့္ […]